State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi receives Republic of Serbia First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi receives Republic of Serbia First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
Republic of the Union of Myanmar State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs Daw Aung San Suu Kyi received the Republic of Serbia First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Mr. Ivica Dacic at the Presidential Palace on 29 January 2019 morning.
At the meeting promoting bilateral relations and economic cooperation in accordance with the historically long and friendly bilateral relations, conducting the established coordination meetings between the two foreign ministries onaregular basis, increasing bilateral cooperation in areas of mutual benefit in the international arena and cooperation in news media matters were openly discussed.
The meeting was attended by Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin, officials from Office of the President and Ministry of Foreign Affairs.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၂၉-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Ivica Dacic အား ၂၉-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နံနက် ၁၀ဝ၀ နာရီတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်းနှင့်အညီ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား တည်ထောင်ထားရှိသည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ပုံမှန်ကျင်းပသွားရေး၊ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာ၌ နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် သတင်းမီဒီယာကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။